Hotel Shinola oo lagu dhawaaqay Maareeyaha Guud ee cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Hotel Shinola oo lagu dhawaaqay Maareeyaha Guud ee cusub
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Hoteelka Shinola, mashruuc laba gadaashiisa ah Detroitnoocyada ku saleysan, soo-saaraha raaxada ee Shinola iyo shirkadda guryaha ee Bedrock, oo la furay horaantii 2019, ayaa ku dhawaaqay magacaabista Mark O'Brien inuu noqdo Maareeyaha Guud ee hoteelka. O'Brien wuxuu keensanayaa 25 sano oo khibrad ah doorkiisa cusub wuxuuna kormeeri doonaa dhammaan dhinacyada howlaha hoteelka ee qolka 129, oo ay kujiraan adeegyada martida, daryeelka guriga, dayactirka, iyo iibka.
"Jacaylka aan u qabo dadka iyo aaminsanaanta waxa ay Shinola iyo Bedrock ka sameynayaan magaalada ayaa ah waxa runtii ii keenay Detroit," ayuu yiri Mark O'Brien. "Waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo kooxdan oo aan fursad u helo inaan u abuuro jawiga ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee shaqaalaheena iyo sidoo kale waayo aragnimo huteel heer sare ah oo heer sare ah oo qof walba oo martida ah ah."
O'Brien wuxuu shaqadiisa bilaabay 25 sano ka hor isagoo ah wakiil ka socda xarunta 'New Desk Agent' ee New York Hilton waxaana ku xigay jagooyin hogaamineed oo halkaas ka jiray iyo The Waldorf Astoria. Wuxuu shaqadiisa ka sii watay magaalada New York ilaa iyo 2010, isagoo maamule guud ka ahaa guryo badan oo Manhattan ah oo ay ka mid yihiin Hotel Wales, Maritime Hotel, iyo Dream New York Midtown. Waqtigaas oo dhan, O'Brien wuxuu sidoo kale ahaa Maareeyaha Guud ee adeegga Boos celinta hoteelka ee khadka tooska ah, Quikbook. O'Brien wuxuu markaa u guuray Midland, MI halkaas oo uu maamule guud ka ahaa Wyndham Hotel Group's H Hotel, oo uu ku xigay kaalintiisii ​​ugu dambaysay ka hor Shinola Hotel oo ah Madaxweyne ku xigeenka Lodging ee Boyne Mountain Resort ee Boyne Falls, MI. O'Brien wuxuu ka qalin jabiyay Jaamacadda Michigan State wuxuuna hadda degan yahay Detroit, MI isaga iyo qoyskiisa.
"Mark wuxuu ku biirayaa kooxda Shinola Hotel waqti muhiim ah markii aan galaynay sanadkii labaad suuqa Detroit ee sii kordhaya," ayuu yiri Sergio Maclean, Milkiilaha Mac & Lo, oo ah huteelka hudheelka. "Tamarta iyo xiisaha uu u qabo kooxda hudheelka ayaa ah mid faafa waana ku faraxsanahay inaan ka dhigno qayb muhiim ah Hotelka Shinola."